ဗိုလ် ၅ ပါး
ကသိုဏ်း ဆိုသည်မှာ ပါဠိစကား ကသိဏ မှ ဆင်းသက်လာသည်။ အလုံးစုံ အကုန်အစင် တပြိုင်နက် ထင်မြင်အောင် ဆင်ခြင်ကြည့်ရှုအပ်သော အာရုံဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ကသိုဏ်း ပါး တို့မှာ - ၁ ပထဝီကသိုဏ်း = မြေအဝန်း၊ ၂ အာပေါကသိုဏ်း = ရေအဝန်း၊ ၃ တေဇောကသိုဏ်း = မီးအဝန်း၊ ၄ ဝါယောက ...
ကာမဂုဏ် ဆိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ အလိုအရ ငါးဖြာအာရုံကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး ကိလေသာအာရုံ၌ ဖွဲ့စည်းတတ်သော တရား ငါးပါး ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ထိုငါးပါးမှာ ၁ ရူပါရုံ - အဆင်းအာရုံ၊ ၂ သဒ္ဒါရုံ - အသံအာရုံ၊ ၄ ရသာရုံ - အရသာအာရုံ၊ ၃ ဂန္ဓာရုံ - အနံ့အာရုံ၊ ၅ ဖ ...
အခါတစ်ပါး မြတ်စွာဘုရားနှင့် နောက်ပါ သံဃာတို့သည် ဒေသစာရီ ကြွချီတော်မူရာ ကောသလတိုင်း ကေသမုတ္တမည်သော နိဂုံးသို့ ရောက်တော်မူ၏။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ကြွရောက်တော်မူသည်ကို သိကြကုန်သော ကေသမုတ္တ နိဂုံးသား ကာလာမအမျိုးကောင်းသားတို့သည် ဘုရားရှင်အား လာရောက် ဖူးမျှေ ...
၁ ကိလေသာ အကျဉ်း ပါး ၁.၁ လောဘ ၁.၂ ဒေါသ ၁.၃ မောဟ ၁.၄ မာန ၁.၅ ဒိဋ္ဌိ ၁.၆ ဝိစိကိစ္ဆာ ၁.၇ ထိနမိဒ္ဓ ၁.၈ ဥဒ္ဓစ္စ ၁.၉ အဟိရိက ၁.၁၀ အနောတ္တပ္ပ ၂ ကိလေသာ ၁၅၀၀ ဖြစ်ပုံ
အဟံ ဘန္တေ တိသရဏေန သဟ နဝင်္ဂသမန္နာဂတံ ဥပေါသထသီလံ ဓမ္မံ ယာစာမိ၊ အနုဂ္ဂဟံ ကတွာ သီလံ ဒေထ မေ ဘန္တေ။ ဒုတိယမ္ပိ အဟံ ဘန္တေ တိသရဏေန သဟ နဝင်္ဂသမန္နာဂတံ ဥပေါသထသီလံ ဓမ္မံ ယာစာမိ၊ အနုဂ္ဂဟံ ကတွာ သီလံ ဒေထ မေ ဘန္တေ။ တတိယမ္ပိ အဟံ ဘန္တေ တိသရဏေန သဟ နဝင်္ဂသမန္နာဂတံ ...
ကုသိုလ်ကမ္မပထ တရား ဆယ်ပါး
ကုသိုလ်ကမ္မပထ တရား ဆယ်ပါး ၁။ဒါန - သဒ္ဒါကြည်ဖြူပေးလှူရခြင်း။နှမြောတွန့်တိုမှု့မရှိခြင်း ၂။သီလ - ကာယ၊ဝစီ ထိုနှစ်လီသော ဒုစရိုက်ကို မလိုက် ပယ်ကြင်ရခြင်း။ စောင့်ထိမ်းနိုင်မှု့ ၃။ဘာဝနာ - သမထ၊ဝိပဿနာထိုနှစ်ဖျာကို လေ့လာ ပွားများရခြင်း။ သတိရှိမှု့နှင့်ပွား ...
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၁၆)ချက်
ကောသလမင်း အိပ်မက်ချက် သည်ကား မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်က ကောသလမင်းကြီး မြင်မက်သော အိပ်မက်ဖြစ်သည်။ ထို အိပ်မက်ကို မိဖုရားကြီးအား ပြောပြရာ မိဖုရားကြီး တိုက်တွန်းချက်အရ ကောသလမင်းသည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ အိပ်မက်အကြောင်း သွားရောက်လျှောက်ထားလေသည် ...
ပြုလုပ်ကျင့်ကြံ အားထုတ်ထားသော ကုသိုလ်ကံ ၊ အ ကုသိုလ်ကံ တွေကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကုသိုလ်ကံကြောင့် ကောင်းရာ သုဂတိ ရောက်မည်။ အကုသိုလ်ကံကြောင့် မကောင်းရာ ဒုဂ္ဂတိဘဝရောက်မည်။ မည်သည့်ဘဝသို့ ရောက်စေကာမူ သေရ ဦးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ကုသိုလ်ကံ ၊ အကုသိုလ်ကံ တို ...
ရဟန်းနဲ့ဒါယကာ၊ တပည့်နဲ့ဆရာ၊ လင်နဲ့မယား၊ မိဘနဲ့ သားသမီး တို့ကြာရှည်တည်မြဲစွာ တန်ဖိုးရှိသော အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုခု လက်တွဲခြေပူး အတူတူလျှောက်လှမ်း ဖြတ်သန်းနိင်ရန် ဖော်ရွေမေတ္တာ ကြင်နာမှုတွေ ပျက်ပြယ် မရိုဖရဲဖြစ်မသွားအောင် ကျင့်ဝတ်တရားသည် ရစ်ပတ်တုပ်နှောင်ခ ...
ကျေးဇူးတော်ရှင် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ခုနစ်နေ့ဘုရားရှိခိုး သန္ဓေယူသောနေ့ မ - သန် ၁။ သုံးလူ့ရှင်ပင်၊ ကျွန့်ထိပ်တင်၊ သောင်းခွင်စင်္ကြာဝဠာ၊ နတ်ဗြဟ္မာတို့၊ ညီညာရုံးစု၊ တောင်းပန်မှုကြောင့်၊ ရတုနဂို၊ ရွှန်းရွှန်းစိုသည်၊ ဝါဆိုလပြည့်၊ ကြွက်မင်းနေ့ဝယ်၊ ခ ...
မြတ်စွာဘုရား သီတင်းသုံးရာ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရှိ မွှေးကြိုင်သော ရနံ့ရှိသည့် တိုက်ခန်းဖြစ်သည်။ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား လက်ထက်တော်တွင် အနာထပိဏ် သူဌေးသည် သာဝတ္ထိပြည်၏ အနောက်တောင် မျက်နှာတွင် ဇေတမင်းသား စိုက်လုပ်အပ်သော ၁၆ ပယ်ကျယ်သည့် ဥယျာဉ်ကို အသပြာငွေ ၁၈ က ...
ဂန္ဓာရုံ။ ။ ဂန္ဓာရုံဟူသည်ကား အနံ့ပင်ဖြစ်၏။ အနံ့ကို တိရစ္ဆာန်များ သည် လူတို့ထက် ပိုမို ထိရောက်စွာ ခံစားနိုင်ကြသည်။ ခွေး တစ်ကောင်ကို အဝတ်ဟောင်းတစ်စ ပေးလိုက်လျှင် ထိုခွေး သည် အဝတ်စပိုင်ရှင်ကို ရှာပေးနိုင်သည်။ ယင်းသို့ သိမှုမှာ အနံ့ဖြင့် ခွဲခြားသိရှိ ...
ခုဒ္ဒကပဌအဋ္ဌကထာ၊ မင်္ဂလာသုတ္တအဖွင့်၌ဂါထာဟူသောပုဒ်ကို အက္ခရပဒနိယမိတဂန္ထိတေနဝစနေနဟူ၍ အဋ္ဌကထာဆရာ ရှင်မဟာဗုဒ္ဓွဃောသ ဖွင့်ဆိုအပ်သည်နှင့် လျော်စွာ အက္ခရာ ပုဒ်တို့ကို သတ်မှတ်၍ ဖွဲ့ဆိုရေးသားအပ်သော ပါဠိအဖွဲ့ကို ဂါထာ ဟု ခေါ်သည်။ ဂါထာကို ပဇ္ဇဟူ၍၎င်း၊ သိလောက ...
အခါခပ်သိမ်း မိမိထံမှ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသာလျှင် လာရောက် ဆောင်ယူလေ့ရှိသော အညဒတ္ထုဟရ မည်သော မိတ်တု။ လက်ချည်းလာ၍ ၊ ဥစ္စာဆောင်သယ် ၊ နည်းငယ်ဖြင့်သာ ၊ များစွာလိုရှိ ၊ ဘေးထိရောက်ခါ ၊ ပြုလှာတုံဘိ ၊ မိမိကျိုးငှာ ၊ မှီလှာပေါင်းယှဉ် ၊ လေးယောက်စဉ်ကား ၊ အညဒတ္ထုဟရ ...
ဂုဏ် ဆိုသည်မှာ ဂုဏ်ဟူသော ပါဠိမှလာသော စကား ဖြစ် သည်။ အဓိပ္ပာယ်ကား အထင်အရှားပြခြင်းဟူ၍ ဖြစ်လေသည်။ သို့ဖြစ်၍ အထည်ကိုယ်ဒြပ်ကို ထူးခြားထင်ရှားအောင်မြင်ပြသော အခြင်းအရာကို ဂုဏ်ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းကြလေသည်။ ဂုဏ်သည် သက်ရှိသက်မဲ့အရာအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည် ...
ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် ဂုဏ်တော် ဆိုသည်မှာ ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ်ကျေးဇူး စွမ်းရည်သတ္တိ အရည်အချင်းများ ကိုဆိုလိုသည်။ ဂုဏ်တော် ဟူသော စကားလုံးသည် "ဂုဏ" နှင့် "တော်" တို့ကို ပေါင်းစပ်ထား၍ "ဂုဏ" သည် ကျေးဇူးတရား၊ အရည်အချင်းများဟု အနက်ယူနိုင်ပြီး "တော်" သည် မြင့်မြတ်မ ...
သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊ အရဟံဝတ သော ဘဂဝါ၊ အရဟန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ အရဟန္တံ သိရသာ နမာမိ၊ ပထမော ဝဇီရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သိရသာ နမာမိ၊ ဒုတိယော ...
ဤသုတ်တော်သည် ရှေးပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ ရေးဖွဲ့သီကုံးအပ်သော ပရိတ် အရံအတားဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းကာ နတ်တို့၏ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုခံရ၏။ ဂေါတမစက်ပရိတ်တော် ၏ ပါဠိ နှင့် မြန်မာပြန်စကားပြေ ၁။ပါဠိ-ဘန္ဒေ မယာ ကဿပ မဟာ ထေရော ဧဝံ မေသုတံ ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ သာဝတ္ထိယံ ...
ဂေါတမဗုဒ္ဓသည် နေရာဒေသအမျိုးမျိုးတွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့သည်။ အများဆုံးသီတင်းသုံးခဲ့ရာနေရာများမှ သံဃာတော်အများအတွက် လှူဒါန်းခဲ့သည့် ကျောင်းတော်များတွင် ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတရံတွင်မူ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ အိမ် သို့မဟုတ် ဥယျာဉ် စသည်တို့တွင်လည်း သ ...
ဂေါတမ ဘုရားအလောင်းတော်သည်ဤ ဘဒ္ဒကမ္ဘာမှ ပြန်၍ ရေတွက်သည် ရှိသော် လေးသင်္ချေ နှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းထက်၌ သုမေဓာရသေ့ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ သုမေဓာရှင်ရသေ့သည် ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရား ခြေတော်ရင်း၌ မိမိတစ်ကိုယ်တည်း နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ရယူနိုင်သော်လည်း ဩဃလေးဖြာ သံသရာ၌ နစ ...
ဃနာနို့ဆွမ်း ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသည် ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူ မည့်နေ့တွင် သူကြွယ်သမီး သုဇာတာသည် ဘုရားရှင်အား ဃနာနို့ဆွမ်းကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းလေသည်။ ရှေးရှေးသော ဘုရားတို့၌လည်း ဤနည်းတူစွာ ဃနာနို့ဆွမ်းကို အလှူခံရစမြဲ ဖြစ်၏။ ဃနာနို့ဆွမ်းဟူသော ဝေါဟာရတွင် ...
ငါးပါးသီလ The Five Precepts: pañca-sila သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ဆုံးမဩဝါဒဖြစ်၍ လူတို့ စောင့်ထိန်းအပ်သော ကိုယ်ကျင့်တရားငါးပါး ဖြစ်၏။ သီလ၏ အနက်ကို ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်အမူအရာတို့ကို ငြိမ်သက်စွာ ထားခြင်းဟု၎င်း၊ ကုသိုလ်တရားတို့ကို ဆောင်ခြင်းဟု၎င်း ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ...
ပါဠိ ကျမ်းဂန်များတွင် ဇာတကခေါ် ဘုရားလောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အဖြစ်တော်များ ရှိသည်။ ထိုဖြစ်တော်များမှာ အရေအတွက်အားဖြင့် ဇာတ်ရှိသည်။ သို့သော် အခေါ်ရလွယ်စေရန်အတွက် ငါးရာ့ငါးဆယ် နိပါတ်တော်ဟု ခေါ်ကြသည်။ ငါးရာ့ငါးဆယ်နိပါတ်တော်ဟု ခေါ်သဖြင့် မြတ်စွာဘုရား ...
စကြဝတေးမင်းသည် အလျားယူဇနာ၊ အနံယူဇနာ၊ အဝန်းယူဇနာရှိသည့် မဇ္ဈိမဒေသ အရပ်မှာ ဖြစ်သည်။ မဇ္ဈိမဒေသ အရပ်သည် ဘုရား ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ၊ အဂ္ဂသာဝက၊ မဟာသာဝက စသည့် မြင့်မြတ်သူများ ဖြစ်ရာအရပ်ဖြစ်သည်။ ပစ္စန္တရစ်အရပ်၌ မဖြစ်ပေ။
ကံ၊ကံ၏အကျိုးကိုအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်သည့်လူသားတို့လျှင် စစ်မှန်သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မည်၏။ ကံ”ဟူသည်မှာ" အလုပ်”ဖြစ်သည်။ အလုပ် ၃ မျိုးရှိပြီး၊၄င်တို့မှာ. မနောကံ တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဝစီကံ နှင့် ကာယကံ၊ ကံတွင်၂မျိုးရှိပြီး၊၎င်းတို့မှာ. အတိတ်ကံ နှင့် ပစ္စုပ္ပန်ကံ တို ...
စတုပါရိသုဒ္ဓိသီလ သည် လေးပါးရှိ၏။ ထိုလေးပါးတို့မှာ ၁ ပါတိမောက္ခသံဝရသီလ၊ ၂ ဣန္ဒြိယသံဝရသီလ၊ ၃ အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလ၊ ၄ ပစ္စယသန္နိဿိတသီလ တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုလေးပါးတို့တွင် ၁ ပါတိမောက္ခသံဝရသီလသည် ရဟန်းတော်များလိုက်နာရသည့် ဝိနည်းများ ဖြစ်သည်။ ၂ ဣန္ဒြိယသံဝရ ...
ပင်ကိုရိုးရာ သူတကာဖြစ်နေကျထက် လွန်ကဲပိုမို၍ အဖြစ်များသည့် အမူအရာကို စရိုက် ဟုခေါ်သည်။ စရိုက်သည် အမှုအကျင့် တစ်ခုကို အသိစိတ်မှ တမင်ကြံစီခြင်းမရှိပဲ မသိစိတ်မှ အလိုလို ဖြစ်ပေါ်ကာ ဆက်တိုက် ပုံမှန် ပြုကျင့်ရာမှ စွဲမြဲဖြစ်ပေါ်လာသည်။ မြန်မာ အယူအဆတွင် စရ ...
စိန္တာမဏိဂါထာ သည် မန္တန်ပေါင်း မျိုးအနက် အလွန်နာမည်ကြီးသော ဂါထာ ဖြစ်သည်။ ၅၅၀ နိပါတ် ပဒကုသလဇာတ်တွင် ဘုရားအလောင်းတော် ပဒကုသလလုလင်အား မယ်တော်ဘီလူးမက ပေးခဲ့သည့် ဂါထာဖြစ်သည်။ ထိုဂါထာတတ်မြောက်သည့် ဘုရားလောင်း ပဒကုသလလုလင်သည် ခြေရာကောက်သည့် အတတ်ပညာကို တတ ...
"နံ့သာနီတောင်၊ ကမ္ဘာရှည်အောင်၊ ဖန်ဆိုးနှင့် လဲဝတ်ကြောင်၊ ကေဥသျှောင်ပယ်လှီး၊ ဈာန်နှင့်နီး၊ ပုတီးလက်တွင်ဆောင်၊ ခရီးမဂ္ဂင်ဖောင်" ဟူ၍ နံ့သာနီတောင် နိဗ္ဗိန္ဒပတ်ပျိုးတွင်ပါရှိပေသည်။ စိပ်ပုတီးကား နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကို ကျင့်ကြံအားထုတ်သူ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒ ...
စူဠမဏိစေတီကား နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်တွင် နှစ်ထပ်မြောက်ဖြစ်သော တာဝတိံသာနတ်ပြည်ဝယ် နတ်များ တည်ထားကိုးကွယ်အပ်သော စေတီဖြစ်၏။ ယင်းစေတီ တည်ထားကိုးကွယ်ခြင်း အကြောင်းကား ဤသို့တည်း။ ဂေါတမဘုရား အလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားသည် ကပိလဝတ်ပြည်ကြီးဝယ် ထီးနန်းစည်းစိမ်ကို ...
စွန့်ခြင်းကြီး ၅-ပါး။ ဇာတ် အဋ္ဌကထာ။ သတ္တမအုပ်။ ၃၃၃-၌ အကျယ်ရှုပါ။သမ္မာသမ္ဗောဓိဆုပန် အလောင်းတော်များ လိုက်နာကျင့်ကြံအားထုတ်ရသည့် ပါရမီဖြည့်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းကြီးငါးချက်။ ၁။ ဓနပရိစ္စာဂ- စွန့်နိုင်ခဲလှစွာသော မင်းစည်းစိမ် ရတနာ, ဆင်,မြင်း စသည်ကိုစွ ...
ဆင်ဖြူတော် ဆိုသည်မှာ ရှားပါးစာရင်းဝင် ဆင်အမျိုးအစား တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း သီးသန့် မျိုးနွယ်စုတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပေ။ ဆင်ဖြူတော်ကို အခါအားလျော်စွာ မိုးနှင်းကဲ့သို့ ဖော်ပြလေ့ရှိသော်လည်း အများအားဖြင့် နီညိုရောင်ဖျော့ဖျော့သာ တွေ့ရလေ့ရှိပြီး ရေစိုစွတ်သောအခါ ပန ...
ဆန်ချီသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဗိုပါးစီရင်စု၊ ဗိုပါး မြို့၏ အရှေ့မြောက် ၂၃ မိုင်အကွာတွင်တည်ရှိသော ရွာကလေး တစ်ရွာဖြစ်သည်။ ယင်းဆန်ချီရွာကလေးသည် ရှေးခေတ် အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိပေသည်။ သီရိဓမ္မာသောကမင်း သည် ကလိင်္ဂ တိုင်းကို အောင်မြင ...
၁ ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိ သိက္ခါပဒံ သမာဒိယာမိ။ သူ့အသက် သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏။ ၂ အဒိန္နာဒါနာဝေရမဏိ သိက္ခါပဒံ သမာဒိယာမိ။ သူတစ်ပါး ပစ္စည်း ခိုးယူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏။ ၃ အဗြဟ္မစရိယာဝေရမဏိ သိက္ခါပဒံ သမာဒိယာမိ၊ မမြတ်သော မေထုန်အကျင့်ကို ကျင့်ခြင်းမှ ရှောင် ...
ရသာမွှေးကြူ ဆွမ်းဖွေးဖြူကို၊ ပေးလှူပါရ ဤပုညကြောင့်၊ ဘဝတိုင်းဝယ် ပညာကြွယ်လျှက်၊ မြနှယ်ရွှေနှင့် အနေတင့်၊ အဆင့်ဆင့်မြင့်ရလို။
ဇရာ ဆိုသည်မှာ ဖြစ်ဖြစ်သမျှသော ခန္ဓာတို့၏ အိုမင်းမှည့်ရွှမ်း ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြည့်ခြင်း အမှုသည် ဇရာမည်၏။ ပဋိသန္ဓေတည်နေမှု၏ အစွမ်းအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဥပပတ္တိဘဝကိုးပါး၏ အသစ်သဘောမှ ရွေ့လျောမှု၊ ပျိုသော သဘောမှ ပြောင်းလဲမှု ရင့်ရော်မှု၊ ဆုတ်ယုတ်မှုမျ ...
ဇာတ် ဟူသောစကားမှာ ဇာတက-ဟူသောပါဠိမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး အဖြစ်တော်ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ပါဠိလို ဇာတက ဖြစ်၍ မြန်မာလိုအားဖြင့် ဗုဒ္ဓ၏ ဘုရားလောင်းဘဝ အဖြစ်တော်စဉ်များကို ဖော်ပြဟောကြားထားရာ ကျမ်းပင် ဖြစ်သည်။
ဇာတ်တော်ကြီး ဆယ်ဘွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓအလောင်းတော်ရှင်မြတ် ပါရမီရင့်ညောင်းပြီး ဘုရားအဖြစ် မရောက်မီ နောက်ဆုံး ဘဝဖြစ်စဉ် ဆယ်ခုကို ခေါ်သည်။ ဂေါတမ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည် မိမိ၏ အတိတ်ဘဝ များ၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို ပါဠိဂါထာဖြင့် ဟောကြားတော်မူခဲ့သ ...
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသခင် လက်ထက်ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ ဇောတိက၊ ဇဋိလ၊ မေဏ္ဍက၊ ကာကဝလိယ၊ ပုဏ္ဏဟူ၍ သူဌေးကြီးငါးဦးထင်ရှားသည် ယင်းတို့အနက် ဇောတိကသူဌေးသည် ဘုန်းသမ္ဘာအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဇောတိကသတို့သားကို ဖွားမြင်သောနေ့၌ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် အလုံး၌ရှိသော လက်နက်အသုံးအဆောင်တို့ ...
ဈာန် ဟူသည်ကား အာရုံကိုကြံတတ်၊ ကပ်၍ရှုတတ်သောကြောင့်၎င်း၊ ကုသိုလ်တရားတို့ကို ပိတ်ပင်တားဆီးသော ဆန့်ကျင်ဖက် နီဝရဏတရားတို့ကို လောင်ကျွမ်း ပယ်ဖျက်တတ်သောကြောင့်၎င်း ဈာန်မည်၏။ နီဝရဏတရားတို့ကား ခြောက်ပါး အာရုံကာမဂုဏ်ကို ခံစားလိုသော ကာမစ္ဆန္ဒနီဝရဏ၊ အမျက်ဒေ ...
ဉာဏ် (၇၂) ပါး
ဉာဏ် ပါး မှာ အောက်ပါတို့ ဖြစ်သည်။ ၁။ နာကြားအပ်သော တရားသဘော၌ ဖြစ်သော ပညာ သုတမယဉာဏ် ။ နာကြားမှုဖြင့် ပြီးသောဉာဏ်။ ၂။ နာကြားရ၍ စောင့်စည်းမှု၌ ဖြစ်သော ပညာ သီလမယဉာဏ် ။ သီလဖြင့် ပြီးသောဉာဏ်။ ၃။ စောင့်စည်းမှုကြောင့် တည်ကြည်မှု၌ ဖြစ်သောပညာ သမာဓိဘာဝနာမယဉာ ...
၁ နာမရူပ ပရိစ္ဆေဒဉာဏ် ခွဲခြား -ဘုံသုံးပါး၌ ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးကို ပိုင်းခြား၍ သိသောဉာဏ်၊ Namarupa Pariccheda Nana Knowledge to distinguish mental and physical states ၂ ပစ္စယ ပရိဂ္ဂဟဉာဏ် သိမ်းဆည်း-ရုပ်နာမ်နှစ်ပါး၏ ဖြစ်ကြောင်းတရားကို သိမ်းဆည်းသောဉာဏ်၊ ...
ဌာပနာ ဆိုသောစကားသည် ပါဠိမှ ဆင်းသက်လာသော စကားဖြစ်၏။ ပါဠိအမှန်ကား ဌပနာ ဖြစ်၏။ ဌပနာကိုပင် ဝါစာသိလိဖြစ်စေရန် ဌ၌အချထည့်၍ ဌာပနာဖြစ်လာသည်။ မြတောင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး ရေးသားအပ်သော ပုဂံမြို့ ဘုရားတဆယ့်ခုနစ်ဆူ သမိုင်း၌ ပါဠိအတိုင်းဌပနဟူ၍၎င်း၊ ပခုက္ကူမြို့ အဂ္ ...
ဤဘဒ္ဒကမ္ဘာမှ ပြန်၍ရေသော် လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း အထက်၌ ဘုရားရှင်လေးဆူ ပွင့်တော်မူသည့် သာရမဏ္ဍကမ္ဘာတစ်ခု ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ထိုသာရမဏ္ဍကမ္ဘာ၌ တဏှင်္ကရာဘုရား၊မေဓင်္ကရာဘုရား၊ သရဏင်္ကရာဘုရား၊ ဒီပင်္ကရာဘုရား ဟူ၍ ဘုရားရှင်လေးဆူ ပွင့်တော်မူခဲ့သည်။တဏ ...
တရား ဆိုသည်မှာ ဘုရားဖြစ်သည်မှစ၍၊ ပရိနိဗ္ဗာန်စံလွန် တော်မူသည်အထိ၊ ၄၅ ဝါပတ်လုံး လူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါတို့အား ဟောကြားတော်မူအပ်သော ဒေသနာတော် စကားတော် ကိုဆိုသည်။ ယင်း တရားတော်မှာ မဂ်လေးပါး၊ ဖိုလ်လေးပါး၊ နိဗ္ဗာန်၊ ပရိယတ်ဟူ၍ဆယ်ပါးရှိသည်။ တစ်နည်း၊ ၄၅ ဝါပတ် လ ...
သွာက္ခာတ ဂုဏ်တော် မြတ်စွာဘုရား ကောင်းစွာ ဟောထားသည့်တရားဖြစ်ခြင်းဂုဏ်။ သန္ဒိဌိက ဂုဏ်တော် ကိုယ်တိုင်ကျင့်လျှင် ကိုယ်တိုင်သိနိုင်သော တရားဖြစ်ခြင်းဂုဏ်။ အကာလိက ဂုဏ်တော် အခါမလပ် အကျိုးပေးခြင်း၊ မဂ်ရလျှင် ဖိုလ်ချက်ချင်း ဖြစ်ခြင်းဂုဏ်။ ဧဟိပဿိက ဂုဏ်တော် ...
တိရစ္တာနကထာ ၃၂-ပါး။ မဟာဝဂ္ဂသံယုတ် ပါဠိတော် ၃၆၈။ ဋ္ဌ။ ၃၂၅၌ အကျယ်ရှုပါ။ မဂ်ဖိုလ်မှ ဖီလာကန့်လန့်စကားရပ်ဟူသမျှသည် တိရစ္ဆာနကထာချည်းမည်၏၊ အနေက ဝိဟိတံ တိရစ္ဆာန ကထံဟု သီလက္ခန် ပေါဋ္ဌပါဒသုတ်၌ လာရှိသောကြောင့်လည်း တိရစ္ဆာနကထာကို ၃၂ပါးဟု အတိအကျ သင်္ချာတပ်ရန် ...
တောင်စဉ် ခုနှစ်ထပ်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူအဆအရ ၃၁-ဘုံရှိရာ ထိုဘုံများတွင် မြင်းမိုရ်တောင်ကြီးကို ဝန်းဝိုင်းပတ်ခွေလျက် တည်နေကြသော တောင်ရံခုနစ်ထပ်ကို ခေါ်ဆိုသည်။ ဘုရားခြေတော်ရာရှိ စက်လက္ခဏာတွင်လည်း ပါရှိလေသည်။ ဤသန္ဓရတောင်-၎င်းတောင်၏ ရေမြှုပ်ရေပေါ်အထုအနံတိ ...